मुटुमा पनि पर्न सक्छ कोभिड १९ को असर : ध्यान नदिए ज्यानसमेत जान सक्ने
मुख्य पृष्ठविदेश स्वास्थ्यमुटुमा पनि पर्न सक्छ कोभिड १९ को असर : ध्यान नदिए ज्यानसमेत जान सक्ने
विराटनगर/कोभिड १९ सङ्क्रमण निको भएपछि पनि मानिसहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिने गरेका छन् । हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार यसले सबैभन्दा बढी असर फोक्सोमा गरेको छ, जसको कारणले निको भएको लामो समयसम्म पनि श्वासप्रश्वास सम्बन्धित समस्याहरु देखिने गरेको छ ।
तर कोभिड १९ सङ्क्रमणको कारण मानिसहरुमा मुटसम्बन्धी समस्याहरु पनि देखिन थालेका छन् । एक पटक सङ्क्रमण भइसकेकपछि केही व्यक्तिहरुको मुुटुमा सुजन हुने गरेको छ जसलाई मायोकार्डिटिस भनिन्छ । मानिसहरु सङ्क्रमणबाट निको भइसकेपश्चात विस्तारै सामान्य जीवनतर्फ फर्किन चाहन्छन् ।
हाल चिकित्सकहरु त्यस्ता संक्रमितहरु निको भइसकेपश्चात शारीरिक क्रियाकलाप तथा व्यायाम गर्न कतिको सक्षम हुन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । किनकि मायोकार्डिटिस (मुटुको मांशपेशीमा सुजन) भएका व्यक्तिहरु शारीरिक क्रियाकलाप वा व्यायाम गर्दा हृदयको गति तीव्र हुन गई मृत्युसमेत हुने गरेको छ । यस महामारीका कारण धेरै खेलाडीहरु पनि सङ्क्रमित भइसकेका छन् । अहिले केही चिकित्सकहरुले यसै विषयमा सरोकार राख्दै केही अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए कोभिड १९ भएका कुन समूहका मानिसहरु अत्यधिक जोखिममा छन् ? कोभिड १९ संक्रमण निको भएपश्चात व्यायाम गर्दा वा खेल खेल्दा मुटुको परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ?
यस्ता प्रश्नहरुले अमेरिकन कलेज अफ स्पोर्टस् मेडिसिन, अमेरिकन आर्थोपेडिक सोसाइटी फर स्पोर्टस्ले आयोजना गरको भर्चुअल सम्मेलनमा प्राथमिकता पाएको थियो ।
‘वास्तवमा चिकित्सकहरु यही सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् कि कोभिड १९ सङ्क्रमणबाट निको भइसकेपछि मानिसहरु सामान्य क्रियाकलापतर्फ फर्कन सकुन् । तर यसका लागि अझै पर्याप्त अध्ययन गर्न बाँकी छ । विशेषगरी खेलमा संलग्न भएका र व्यायाम गर्नेहरु कहिलेबाट अभ्यास गर्न सक्छन््, मुटुको परीक्षणविना पनि अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्छन्, यस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरिनु पर्छ ।’ सिकागो नर्थशोर युनिभर्सिटी हेल्थ सिस्टमका निर्देशक डा. क्यारी जावोस्र्कीले सम्मेलनमा बताए ।
कोभिड १९ का कारण मायोकार्डिटिस (मुटुको मांशपेशीमा सुजन) हुन सक्छ भनेर डाक्टरहरुले पहिलो पटक बुझेपछि कोभिड १९ को लक्षण देखिएकाहरुले शारीरिक गविविधि र खेलकुदमा सक्रिय हुनुअघि मुटु परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ भन्दै अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी (एसीसी)ले मे महिनामा सबै चिकित्सकहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
तर एसिसीले दिएको सुझाव अक्टोबरको अन्तमा मात्र प्रकाशित गर्‍यो, जसमा विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीहरुले अपनाउनु पर्ने सर्तकताहरुका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले मुटुको परीक्षण गर्ने वा नगर्ने ?
कोभिड १९ सङ्क्रमणको मध्यम वा कडा लक्षण देखिएका खेलाडीहरुले ‘इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, ट्रोपोनिम रगत परीक्षण’ गर्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । तर लक्षण नदेखिएकाहरुले परीक्षण गर्न आवश्यक नरहेको भनी रिर्पोटमा जानकारी दिइएको छ । यदि धडकन अनियमित भएमा वा असहज भएको महसुस गरेरहे मुटुको एमआरआई गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
‘कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट अस्पतालमा भर्ना गरिएकामध्ये २० प्रतिशतमा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिने गर्दछ, जुन सामान्य कुरा हो ।’ एट्लान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीका स्पोर्टस् कार्डियोलोजीका प्रमुख जोथनकिमले भने । ‘एउटा सामान्य भाइरलको कारण श्वासप्रश्वासमा हुने समस्याले पनि सङ्क्रमितमध्ये एक प्रतिशत मानिसहरुमा मुटुको समस्या देखा पर्छ,’ उनले भने ।
तर अधिकांश मानिसहरुले सामान्य श्वासप्रश्वासको समस्या भएपश्चात मुटुको परीक्षण गर्दैनन्, तर कोभिड १९ फरक रोग हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई थाहा छ कि कोभिड १९ बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरुमा मुटुको समस्या हुने जोखिम उच्च हुन्छ । तर लक्षण नभएकाहरुका बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएको चिकित्सहरु बताउँछन् ।
‘कोभिड १९ को लक्षण नभएका वा हल्का लक्षण भएका खेलाडीहरुमा मुटुको असरबारे अझै पनि हामी अनभिज्ञ नै छौं,’ किमले भने ।
स्रोत : एनबीसी न्युज